Maninona ny Video Product no laharam-pahamehana ary karazana video 5 tokony hamokaranao | Martech Zone
2015 dia taona nanaparitahana firaketana horonantsary ho an'ny vokatra, miaraka amin'ny fahitana horonan-tsary tafakatra 42% hatramin'ny 2014. Tsy izany anefa ny tantara manontolo. Ny 45% n'ny horonan-tsary rehetra dia niseho tamin'ny a fitaovana finday. Raha ny marina, tamin'ny telovolana farany tamin'ny 2015, nitombo 6 heny haingana ny fahitana horonan-tsary finday noho ny fijerin'ny horonantsary birao. Ity sy ireo angona hafa nomen'ny Invodo's Product Product Benchmarks Report dia manana ny fanamarinana rehetra ilain'ny mpivarotra hampihatra paikady video… eo noho eo.
Sintomy ny tatitry ny Benchmarks Video Product Invodo's 2015
Niara-niasa tamin'ny mpanjifanay rehetra izahay mba hahazoana antoka fa tafiditra ao anatin'ny paikadim-baovaon'izy ireo:
Lahatsary Manazava - hanazava feno ireo olana saro-pantarina izay ampian'ny vokatra na serivisin'izy ireo, manome fahatakarana tsara kokoa, toerana, fifamatorana ary fiovam-po.
Fitsangatsanganana vokatra - fitsangatsanganana endri-javatra na fizotran'ny vokatra azon'ny orinasanao ampiasaina.
Testimonials - tsy ampy ny mametraka ny vokatrao na serivisinao, tokony hanana horonan-tsarimihetsika mpanjifa miaraka amn'ny tena mpanjifa maneho ny valiny azony tratrarina.
Thought Leadership - ny fanomezana horonan-tsary izay manampy ny mpanjifanao hahatratra fahombiazana ao anatin'ny orinasany na amin'ny vokatrao na serivisinao dia hampitombo ny lanjan'izy ireo amin'izy ireo.
Horonan-tsary ahoana - mpanjifa maro no te hisoroka ny antso an-tariby sy ny pikantsary hianarana ny fomba fanaovana zavatra. Ny fanomezana trano famakiam-boky momba ny fomba fanaovana video dia afaka manampy ny mpanjifanao hamaha haingana ny olana sy hampitombo ny fampiasan'izy ireo ny vokatrao.
Ity ny Invodo's Infographic, Lahatsary momba ny vokatra sy ny fipoahana finday: Recap Benchmarks horonantsary vokatra 2015.
Tags: invodoLahatsary findayfitomboan'ny horonantsary findayhoronantsary vokatrabenchmark video momba ny vokatrafitomboan'ny horonan-tsarysary infographicstatistika amin'ny horonan-tsary